daadah.com - carruurta
Posts Tagged ‘carruurta’
Oohin, xanaaq iyo iska caabin diidmo xanbaarsani waa calaamado soo kordha marka waalidiintu doonaan inay maca-salaameeyaan carruurta yar yar ee ay da’doodu u dhexayso 8 ilaa 14 billood. Carruurtaasi waxay la yimaadaan cabsi ka timid welwelka kala-tagida (seperation anxeity) marka waalidkood uga tagaan qof kale oo ku sii sima ilmaha inta waalidku maqan yahay. Welwelka kala-taga
Autism – Sirgaxan
Cudurkaan afka qalaad lagu yiraahdo Autism waa mid ku cusub Soomaalida ama waxaa laga yaabaa inuu muddo jiray, laakiin aan la xaqiijin jirin. Sidaas awgeed, u malaynmaayo inuu jiray magac-bixin Soomaali ah oo uu leeyahay. Waxaan qiyaasayaa inaan ahay qofkii ugu horeeyay oo qoraal ahaan ku soo gudbiyay. Waxaan Qiyaasay maadaama uusan magac hore Soomaalida